Ingosvika ipapo! Guyana Carnival magineti evashanyi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Guyana Breaking News » Ingosvika ipapo! Guyana Carnival magineti evashanyi
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Fashoni Nhau • Hurumende Nhau • Guyana Breaking News • Musangano Weindasitiri Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Dai 20, 2018
Yayo nguva yeCarnival kuGuyana. Mharidzo yepamutemo yeGuyana Carnival yaive "Ingosvika pano." Zviuru zvevashanyi vakasvika kuGuyana vanozobatana nevagari vemunharaunda uye nevanodzingirira kumitambo. Iyo isingamireGuyana Carnival pati inosanganisira svondo-rakazara-revhisi rezviitiko zvakasangana neGuyanese zvekudya, mimhanzi, varaidzo uye masqueraders ayo anoperera painotarisirwa Finish Line.
Guyana Carnival mutambo wega wega muGeorgetown Guyana, panguva yaMay 18 - 27. Iko kusangana kwemasimba ane chekuvaraidza ane simba, Hurumende yeGuyana uye nevamwe vakakurumbira vanogadzira chigadzirwa chitsva chinonakidza kusimudzira kushanya, varaidzo, uye husiku husiku.
Aka ndiko kechipiri mutambo wemafaro uyo Guyana Carnival wakakwereta kubva kuTrinidad neEastern Caribbean mumakore achangopfuura. Yokutanga ndiJovert. Nhoroondo nekusimudzirwa kweizvi zvine zvinyunyuto zvikuru.
Guyana Carnival ikozvino yabatana nedzimwe nyika mukupemberera carnival, iri zvese, zvakasiyana, tsika-yakareba-tsika uye nyowani yekutevedzera. Zvese zvitsuwa zveWest Indian zvine mhemberero dzakapembererwa pamisi yakasiyana pagore - ese ndiwo mavara anoyevedza ane varaidzo yepamusoro, asi muchiitiko chemhemberero kuGuyana pane zvakakosha pfungwa musiyano.
Chirevo muStabroek Nhau chinoisa:
Icho chinonzi J'ouvert muGuyana ikonsati hombe, inozivikanwa, inotungamirwa neTrinidadian soca maartist. Izvi zvaisava zvitsva kuGuyana uye zvagara zvichingobatwa nguva nenguva. Vakagadzira zita idzva uye vakadzika midzi mukati memakore mashanu apfuura, asi vakakurumbira panguva yeMashramani, uye vaive vakakurumbira panguva yekupemberera kweJubheri kweGuyana muna2016. Zita rekuti J'ouvert inzvimbo yemutambo weTrinidad. Iri izwi rechiFrench creole / Patois rakatorwa kubva kuFrench Jour Ouvert - "kuvhura kwezuva" uye rinotsanangura tsika nemabasa emangwanani-ngwanani pakutanga kweCarnival Muvhuro.
J'ouvert ikozvino ndiyo inotungamira ficha mune yazvino Guyana Carnival. Vatatu vavo vakaitirwa kuMashramani nguva 2018, uye ivo vari kutungamira mafaro emapati uye mashoo panguva ino. Asi kunyangwe paine yakadzika midzi tsika yetsika muTrinidad neEastern Caribbean, hapana kana imwe kuGuyana.
Iyo iripo Guyana Carnival - dzimwe nguva inonzi Guyana Independence Carnival yakatangira mumhemberero dza2016 dzeJubheri renyika - 50th Anniversary yeRusununguko. Kufora kukuru kwemugwagwa nemaratidziro echinyakare emabhandi kwakatemwa kubva kuMashramani Day, Kukadzi 23 uye kuiswazve kuIndepen-dence, Chivabvu 26. Iye zvino mutambo wecarnival wakazara uye uri kumhanya kwemazuva gumi kusvika May 28. Inosanganisira nhevedzano refu yemapati / vacheche, nhandare inoratidzira uye kuratidzwa kwemabiko emitambo anodhura mumugwagwa.
Guyana Carnival inotsigirwa uye inotsigirwa nehurumende asi inosundwa zvakanyanya nezvido zvevamwe. Inoshambadzirwa zvakanyanya nekumhanya kushambadzira uye kusimudzira kusimuka. Pasina kupokana, inokwezva kune yakakurumbira tsika uye inopa yakareba, ine mari yepamusoro varaidzo. Kunyangwe vemuno masoca maartist vakaisa simba ravo mukati mayo uye vari kuoneka mune mamwe maratidziro. Kune zvinokatyamadza zvinangwa zvevashanyi vanosvika. Zviripachena zvinopa mukana wehupfumi kune dzinoverengeka zvido nemabhizinesi. Mumwe haakwanise kufanotaura kuti ichakura ichivei, asi iri kutevera tsoka dzeJamaica Carnival panguva yePasika, iyo yakave yakakurumbira uye yekutengeserana kubudirira.
Zvakangodaro, zvinofanirwa kubvumwa kuti iyo Guyana Carnival ndeyekunyepedzera kwepamusoro, kunyangwe yakawanda sei inogamuchirwa neyakajairika tsika. Icho hachina chinhu chitsva uye chakangotetepa zvichibva patsika dzetsika. Panogona kunge pasina chirongwa chekuongorora nesainzi vanosvika panhandare kana kushandisa mamwe marongero ekuona chaiko vashanyi vanosvika kumutambo uyu, asi zvinotarisirwa zvekusimudzirwa kwekushanya zvinogona kunge zvisiri zvechokwadi - kunyanya gore rino. Zvichava zvinonakidza kuona zvinoitika mumakore anotevera, asi tarisiro haigone kuve yakajeka yechiitiko chinongoteedzera izvo zviri kutopihwa neanenge ese madhiri eWest Indian. Pamusoro pezvo, iyo vhezheni yeGuyana yakadzikiswa zvakanyanya kune angangoita mapato uye anoratidza; zvitsuwa zvinopa zvimwe zvakawanda.
Pamwe pamwe nekupemberera kukuru kweTrinidad (uye kuti muRio, Brazil) chiwi chese chekuWest Indian chine mhemberero. Ivo vane nhoroondo yeRoman Katurike kana chiFrench nhoroondo ndeye 'nyika dzemitambo' kana vari mukati memabhandi emitambo. Ivo vanogovana nhoroondo yenhoroondo yemitambo nemwaka pakati paNdira naAsh Chitatu, kutanga kweLent. Trinidad yakachengeta izvi. Dzimwe nyika dzakaita seSt Lucia, St Vincent, Dominica, Grenada dzakachinjisa yavo kuita muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu kuti dzidzivise kunetsana neTrinidad yavaisakwanisa kukwikwidza nayo. Zvese zvavo zvekudyira vane zvakafanana tsika, nhoroondo uye echinyakare midzi.
Zvimwe zviwi zvese zviri kunze kwebhandi remitambo. Antigua-Barbuda neSt Kitts-Nevis, zvisinei, vakagadzira mutambo wemitambo muna Nyamavhuvhu, asi izvi zvakakura kubva mutsika dzatovepo dzetsika, senge yeKisimusi masquerade yeSt Kitts uye tsika dzekusima dzehusungwa. Midzi yavo haina kudzika. Bharabhadhi yakavaka Crop-Over muna Nyamavhuvhu kubva mutsika dzakasimba dzekudyara. Kune mutambo wemitambo muBahamas muna Chivabvu uyo ​​wakagadzirwa semafaro, kunyange hazvo tsika yechiBahamian iri iyo Jonkanoo muna Zvita-Ndira. Zvakawanda sezviri kuitika iye zvino kuGuyana, makore makumi maviri nemasere apfuura, Jamaica yakaronga kutevedzera zvemafaro zvinotanga paSvondo Svondo. Icho chaive chirongwa chakabva kumutungamiri weboka reDragnaires Byron Lee, uyo aikwikwidza zvinobudirira muTrinidad carnival, uye akatosiyana neJamaica Festival iyo inopemberera zuva rekuzvitonga muna Nyamavhuvhu.
Asi ndeipi nhoroondo yeGuyana Carnival? Nyika ino haina kusiyana neCaribbean yese iyo ine nhoroondo yetsika dze carnivalesque. Iyo carnivalesque haina kungowanikwa mumitambo, asi itsika yekuve netsika nemafaro zvakavakirwa pamasquerade, mimhanzi yemuno inozivikanwa uye mabhendi anodhura, kunyangwe mune dzimwe nyika dziri kunze kwebhandi remitambo.
Guyana yaive nemitambo yekuzvimiririra muma1960. Kuzvimiririra muna 1966 kwakaratidzirwa necarnival yakadai yakaitwa naJaycees. Mhemberero idzi dzakaunganidza pamwechete zvaiitwa munyika kubva nyika isati yawana kuzvitonga. Ivo vaisanganisira simbi bhendi, calypso, ichiyangarara mafaro, iyo Bhendi yeGore (mabhendi anodhura ane mibairo nemazita evakagadziri vakanaka) uye mafaro emigwagwa anozivikanwa se "kutsika-tsika". Ikoko kwaive zvechokwadi nechinyakare chimiro cheiyo J'ouvert yakaenzana - "pamberi-zuva mangwanani kusvetuka-kumusoro" nevapembere vachitamba (kutsika-tsika) kuseri kwesimbi mabhendi mumugwagwa.
Izvi zvakachinjwa kubva kuGeorgetown kuenda kuLinden nemaJaycees. Chakanga chiri chiitiko chegore negore icho chakashandurwa uye kuumbwazve kuMashramani semhemberero yeGuyana's Republic Day muna 1970. Chimwe chezvinhu zvinoshamisa ndechekuti vafraya vakatsvaga kubvisa zvinhu zvekutevedzera nekukwereta kubva kumutambo weTrinidad. Zvinhu zvinoverengeka zvakagadziridzwa, uye zvimwe zvakasanganisirwa, izvo zvavaifunga kuti zvaive zvakakodzera nyika yakazvimiririra mune yepashure pechikoloni zita rayo idzva 'remuno' Mashramani. Zvinotoshamisa ndezvokuti izvi zvakazara, uye Guyana ikozvino yave kutora zvinhu zvakawanda, kutevedzera zvemitambo kwakadzivirirwa muna 1970. Mhemberero yemhemberero yakadzoka.
Kune zvimwe zvinonetsa. Mutambo wemakore makumi mana nemasere weGuyanese mutambo weMashramani izvozvi unoratidzika kunge une runyararo padanho repasirese kupfuura chiitiko chitsva chakakweretwa. Muna 48, Mashramani Day mugwagwa unofora neparade yemabhendi inova iyo yepamusoro uye chiyeuchidzo chikuru chemutambo chakatemwa nekuiswa patsva kuitira kuvaka musimboti weiyo rusununguko carnival yekupemberera makore makumi mashanu.
Uyezve, kutungamira vaimbi veGuyana Carnival vava kunyatso kuoneka mumitambo 2018, vachiita zvekushambadzira uye vachionekwa mumitambo. Tamika Marshall, Kwasi 'Ace' Edmundson, Adrian Dutchin, Jumo Primo, Michelle 'Big Red' King uye Natural Black ndivo vari pamberi muindasitiri yemuno asi vakashaikwa kuMashramani. Kunyangwe avo vaimbokwikwidza Mashramani Soca Monarchy havachadaro. Zvinoita sekunge havawone sechakakosha kumabasa avo, mukurumbira wavo, vavariro dzavo dzekubudirira, mihoro yavo yemari kana CV yavo kukwikwidza kuMashramani. Asi ivo havana kuzeza kuve zvishongo mukorona yemutambo mutsva.
Makore mashoma apfuura, mukunda weSoca Monarchy akatadza kuuya kuzodzivirira korona yake. Mumwe akataura chirevo chekuti aibuda mumakwikwi kubvumidza vatsva, vanouya vanonyepedzera kuwana mukana wekuhwina mumakwikwi. Zviripachena, aive asvika. Kusava nehanya kwakadzama ndekwekuti zvinhu izvi hazvimboitike muTrinidad carnival ikozvino iri kuteedzerwa. Unogona here kufungidzira kunyongana kukuru uye kutsamwa muTrinidad dai Machel Montano asina kunetseka nekuuya kuzodzivirira Soca Crown yake? Hapana muimbi weTrinidadian Soca, kunyangwe nyenyeredzi dzepasi rese, anozviona seakakura kana akakurisa zvekutadza kukwikwidza mumakwikwi emitambo gore rega rega.
Iye murwi wekare wemakore makumi mashanu nemasere, The Mighty Chalkdust, akahwina korypso korona muna 45. Pakanga pasina hurukuro, kunyangwe kubva mungano yakadaro, yekumira padivi kune vatsva vanopinda. Kune kudada kukuru, pfungwa yekubudirira uye yekupisa mweya wekukwikwidza pakati pevakanakisa mumunda saFay Ann Lyons, Bunji Garlin, Montano, Destra nevamwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo.
VaGuyanese vanoita kunge vasingatarise Mashramani seyakakosha zvakakwana. Vakuru havana kufunga kuti zvine basa kuti Monarchy yeSoca yakadzingwa kwemakore mashoma. Ivo havana kuzviona sezvakakosha kuchengetedza kuenderana uye tsika kuti mutambo ushande. Simba rakakwira zvino rave kupisa moto wecarnival aive marasha manyoro muna Kukadzi apfuura muna Mashramani nguva. Kana kushinga uku kwese kuchishandiswa pamutambo wepagore gore rega rega zvaizobatsira.
Iko kushingairira, kupisa muviri kuGuyana Carnival, mari yekudyara izvozvi iri kutyaira iyi carnival inogona kunyatso gadzirirwa kuti ipise Mashramani. Hukuru hwakavezwa mumutambo weTrinidad ndizvo izvo Guyana yava kutsvaga kubereka mune yakasarudzika fashoni. Asi Trinidad yakabvumira mhemberero dzayo kukura kuburikidza nemakumi emakore emhirizhonga uye ichinetseka kushanduka kuenda kuchigaro chayo chazvino chekubwinya, nepo Guyana ichiisa tsika yayo panjodzi kuti ikudze nekuvaka yakakweretwa.
Zvimwe pamusoro www.guynacarnival592.com